Alms - यो ... चर्च मा alms दिन - विशेष गरी
दान र कसरी यो लागू गर्न के हो? यो कि त कठिन देखिन्छ हुनेछ? यसलाई गर्न आग्रह पनि भने, कि छैन सबै उत्तेजित गर्दछ र तपाईंले सधैं मदत गर्न सक्छ। Alms - एक विज्ञान। तपाईं यसलाई सिक्न अघि, तपाईं परिचित र धर्मशास्त्र को भाषा बुझ्न पर्छ।
Alms - यो के हो? को alms को दृष्टान्त
त्यहाँ धनी गरिब सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् जो धेरै Parables, छन्। र त्यसपछि आफ्नो दयालु कृपा र माग्दै लागि पुरस्कृत - धैर्यताको लागि।
धर्म अनुसार, दान - गरिब गर्न दिने छ। छिमेकी संग साझेदारी - यो साँचो मसीही जीवनको मुख्य tenets को छ। तर यहाँ यो सही अवधारणा व्याख्या गर्न आवश्यक छ "alms दिनुहोस्।" वास्तवमा मदत गर्नुपर्छ र जसलाई यो मेरो प्राण बेवास्ता र सुरक्षित गर्न, र सोधेर?
को भटक यहूदीहरूको दृष्टान्त
यो मुद्दा पनि बाइबल को Parables एक समर्पित छ। यहूदीहरूले मरुभूमिमा भटक, दुई पटक सुन बलिदान। पहिलो मामला मा, तिनीहरूले आफ्नो महिला सबै गहने संकलित र बाछो तिनीहरूलाई डाली। यो उपहार शैतानको तिनीहरूलाई प्रस्तुत। दोस्रो समय, सबै यहूदी पति सबै सुन र चाँदीका सिक्काहरू संकलन। तिनीहरूले प्रभु परमेश्वरको वरदान रूपमा प्रस्तुत छ।
यो कस्तो अर्थ राख्छ? एक मानिस जस्तै चाडहरूमा, वस्त्र, महंगा गरगहना, कुनै पनि विधिपूर्वक आफ्नो आय, बिताउनुहुन्छ जब यो सबै आफ्नो भूत प्रस्तुत छ। त्यो जसबाट यो पोसिलो छ। र प्राप्त सम्पत्ति र पैसा त्यो गरीब गर्न विशेषताहरू वा तिनीहरूलाई खाना र वस्त्र किन्न भने, मानिसले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरियो। आखिर, उहाँले आफ्नो भित्री हुनुको उज्ज्वल पक्ष prepodnoshenie गर्दैन।
कि नगर्ने व्यक्ति आवश्यकता?
तर हाम्रो संसारमा, कहिलेकाहीं यो धेरै गाह्रो खाँचो साँच्चै छ जो निर्धारण गर्न छ, र जो आफ्नो लोभी आवश्यकताको मुद्रा को लागि भीख माँग, धोखा छ। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण, उहाँले चाहन्थे कति सोध्छन् जो कोहीले गर्न दानको ल्याउन असम्भव छ, र। हामी साँचो आवश्यकता र सट्टेबाजों को विशिष्ट पैसा बनाउन बीच भेद गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यो पनि बाइबलमा यसो छ। प्रत्येक आफ्नो आय अनुसार दिन पर्छ, छ। धनी छन् क्रमशः गर्नेहरूलाई, अधिक। गरिब आफ्नै तिर्न किन्न सक्छन्। र तिनीहरूले उत्तिकै गणना गरिनेछ। आखिर, तिनीहरूले आफ्नो क्षमताहरु मा नै तिर्नुपर्छ।
हामी सही राम्रो काम गर्न आवश्यक छ
त्यसैले तपाईं कसरी अझै पनि दान दिन आवश्यक छ? सम्झना, हृदय देखि र राम्रो मनसाय संग सबै गर्छन्। तपाईं एक व्यक्ति दिन भन्दा बढी आवश्यक देख्न भने, पछुताउनु छैन। Fraudsters छेउमा र अन्य रुचाउने वरिपरि सोधेर अशुद्ध मनसाय को चेतावनी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। राय कोमल र प्रकाश हुनुपर्छ। कुनै मामला मा छैन पछुतो मान्ने वा नचाहनु संग दिइएको गर्न सकिन्छ। जस्तै, यो लागू गर्न, र चाहँदैनन् आवश्यक छ। अथवा, धेरै जस्तै, विशेष गरी धनी: alms गरिब एक पक्षमा संग फेंक। यो सबै एउटै दुखाइ, तपाईं मान्छे सोध्दै हुनुहुन्छ यो क्षण मा अनुभव छ, जो संग फिर्ता हुनेछ।
आखिर, बाइबल तपाईं आवश्यकता मा बस गरिब मान्छे, र तिनीहरूका परमेश्वर छैन लागू छन् भन्छन्। यसरी सबै असल कुराहरू लागि उहाँलाई धन्यवाद र परीक्षण थिचेर। यहाँ सबै भन्दा राम्रो कार्यहरू भन्दै छ "तपाईं छर्न रूपमा, ताकि तपाईं कटनी गर्नेछौं।" कि शुद्ध हृदयले बलिदान ठूलो, अधिक तपाईं त प्रभुको मामिलामा फर्कन छ।
"दाहिने दिन्छ गर्दा, बायाँ यसको बारेमा थाहा हुँदैन।" यो कस्तो अर्थ राख्छ? तपाईं एक दान गर्दा, कुनै एक यो थाहा हुनुपर्छ। र तपाईं कति दिन विचार छैन, तर कति त्यहाँ अझै पनि राम्रो छ। तपाईं पनि त्यस्तै सम्झौता गरेका छन् भने, बिर्सन्छन्। अधिक तपाईं दिन, अधिक हामी पाउनुहुनेछ।
यो जीवन मा अरू सबै कुरा जस्तै कि दान, सम्झना समसामयिक हुन। ढिलो थियो अझै पनि जब सेवा गर्छन्। अझै गरिब मानिस अन्धकारमा सडक मा प्राप्त भएन। साँच्चै, क्रममा धेरै आफूलाई खुवाउन र छोराछोरीलाई पनि ठेस मा जान सक्नुहुन्छ। चोर्न सक्छ धोखा, तिनीहरूको सम्पत्ति दिन अरूलाई बल र खराब कुरा भनेर - हत्या प्रतिबद्ध गर्न। कि खाना उहाँले खाना देखेर बिना मृत्यु हुँदा, एउटा व्यक्ति भोक हुँदा दिनुपर्छ सम्झना। अनाथ वा जो ठेस छ, र तपाईं त प्रभुको जवाफ छैन कि भन्ने मद्दत गर्नुहोस्। हामी मद्दत गर्न सक्छ, र द्वारा पारित, मानिस हात कास्ट आफ्नो प्राण मा एक ठूलो पाप लिनुभयो। तपाईं यसको बारेमा केहि गर्न सक्ने र, त तपाईं जवाफ दिन र त्यसपछि परमेश्वरको सामु बोक्न चाहेनन्।
Alms फरक हुन सक्छ!
आखिर, दान - को खाँचोमा परेका एक असल मानव सम्बन्ध छ।
बाइबल alms बताइएको गर्दा हामी मतलब मात्र होइन भौतिक। यो राम्रो कामहरू र राम्रो मनसाय बारेमा भन्छन्। भौतिक handouts गर्न Alms बराबर। सबैले साझेदारी गर्न आर्थिक वा खाना छ। तर सबैले राम्रो शब्द र मदत गर्न समय छ। धेरै बस मानव समर्थन आवश्यक छ। सबै पछि, तपाईं बिल्कुल केहि खर्च हुनेछ, र कसैलाई जीवन सुरक्षित गर्न सक्षम हुनेछ गर्छन्।
द्वारा पारित छैन - तपाईं सडक रो महिला मा हेर्नुहोस्। अचानक robbed थियो, र उनको मदत चाहिन्थ्यो। या शायद त्यो घर मा समस्या छ, र त्यो कसैसँग साझा थिएन, र त्यो रो थियो। यो एक व्यक्ति बिरामी भयो, र त्यहाँ कुनै सेना हो मदत माग्न सम्भव छ। सबै पछि, तपाईं वा तपाईंको एक प्रेम यो अवस्थामा हुन सक्छ, र सबै पछि राम्रो, जब तपाईं अरू कसैले indifferently पारित छैन।
या शायद तपाईँले पुरानो छिमेकी जसको बच्चाहरु जाने छैन, छ, या यो एकदम एक्लो छ, र सहयोग चाहिन्छ, एक नजर। पसलमा मा पानी, राख्न, काठ, सुग्घर घरमा काट्नु वा एक कप चिया भन्दा कुरा जाने। धेरै एक्लो वृद्ध आफ्नो आधा एक घण्टा, छैन केवल मूड लिफ्ट थियो, तर पनि आफ्नो फिर्ती को जीवन। र यो तिनीहरू नराम्रो लाग्छ र अन्य सम्झना गर्दा हरेक दिन गर्नुपर्छ, तर छैन।
आखिर, हामी सबै भन्दा परिवार कसैलाई आफूलाई वा बिरामी चोट सुरु गर्दा, चर्च जानुहोस्। हामी चर्च मा मोमबत्ती राख्नु, र वितरण गर्दा गरिब कि छ। र यो सही छ? होइन, को पाठ्यक्रम। हरेक दिन कसैले सहयोगको आवश्यक हामी यसलाई सम्झना गर्दा मात्र, र त्यसपछि मात्र आफूलाई सुरक्षित गर्न। यो तपाईं राम्रो स्वास्थ्य मा हुँदा, कुरा गर्न, र अन्यसँग साझेदारी गर्न राम्रो छ।
कहिलेकाहीं यो धनी पनि छोराछोरीलाई मदत छैन भनेर stingy छन् र आफ्नो धन साझा छैन भनेर हुन्छ। र उहाँले आफ्नो मृत्युशय्यामा हुँदा हुँदा त उनलाई सम्झना। त्यसपछि के हुन्छ, जसले साझेदारी गर्न थाल्छन्। तर यस्तो व्यक्ति छोराछोरी आफ्नो अन्तिम इच्छा प्रदर्शन गर्नेछन् पक्का हुन सक्छौं? उहाँले आफ्नो जीवनकालमा तिनीहरूलाई सम्मान छैन मा छ, र तिनीहरूले प्रकारको फिर्ता उहाँलाई भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु आफ्नो धन मार्फत धनी आशिष् दिनुहुन्छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले जीवनमा साझेदारी गर्न आवश्यक छ।
कसरी चर्चमा alms दिन: धेरै मानिसहरू प्रश्न? अब तपाईं एक बेइमान पूजाहारीहरू ठोकर गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै एक दावी यदि alms चर्चमा सेवा र दुई पटक यसको लागि इनाम भनेर। तर यो कहाँ लेखिएको र असल कामहरूमा मन्दिरमा दुगुना छन् भनेर बाइबल मा भने? यो सबै यो आफ्नो खल्ती सबै चाहनुहुन्छ राख्नु गर्ने चर्च पुर्खाहरूले, एक मार्केटिङ योजना जस्तो देखिन्छ। यहाँ पनि, एक तिमी एक दान छोड्न चाहनुहुन्छ जहाँ बीच भेद छ, र एक मन्दिर छेउमा वरिपरि राम्रो प्राप्त गर्न।
दुर्भाग्यवश, केही आधुनिक cathedrals र चर्च छैन पनि सबै प्रार्थना पुजारी थाहा छैन, र अझै थाहा छैन, र पनि बाइबल पढ्न छैन। तर तपाईं categorically सबै व्यवहार गर्न सक्दैन। तिनीहरूलाई को भन्दा अझै छन् साँच्चै प्रभु सेवा गर्छन्। साथै, धेरै गरिब चर्च भीख वा शारीरिक बलको आवश्यकता हो। यो चर्च भनेर विशाल domes र भित्र राम्रो छ र सबै धन र सुन radiates कि छैन। र एक जहाँ पुजारी पाप र प्रकाश र शुद्ध प्राण संग दिनु हुनेछ। चर्च मान्छे भेला र उसलाई कुरा जहाँ प्रभु, घरमा हुन मानिन्छ। मन एक शान्ति - कसैले कसैलाई को स्वास्थ्य बारे सोध्छन्।
छ के को लागि राम्रो पुजारी धन्यवाद। धेरै मानिसहरू साथीहरू र नातेदारहरूले को स्मृति सम्मान मन्दिरमा आउँछन्। वा एक दान ल्याउन। तर धर्मशास्त्रमा प्रभुको घर सुनको हुन र आफ्नो दान को ढोका गर्न ल्याउन गर्ने अनुयायीहरूले, भन्दा ठूलो धन पर्छ भन्न गर्दैन।
माथिको सारांश हामी दान भन्न सक्छौं - यो खाँचोमा परेका गर्न दिएर राम्रो उपहार हो। तसर्थ, शुद्ध हृदयले मानिसहरूलाई मदत!
कुनै कुरा छैन जहां दान सेवा छ: चर्च छ वा एक व्यस्त सडक। मुख्य कुरा हो - को खाँचोमा परेका, यदि छैन पैसा, कम्तिमा त्यसपछि एक प्रकारको शब्द मदत गर्न।
काम मा सफलता को लागि शक्तिशाली प्रार्थना
धर्म Wicca र यसको निर्माता। Wicca संस्कार
दिन एंजेला Veronica। जन्मदिन पार्टी मना गर्दा?
फोटो संग व्यञ्जनहरु: के बीफ हृदय देखि पकाएको सकिन्छ
छैटौं महिना, अल्ट्रासाउंड 22 सप्ताह गर्भवती